Antony 7 hanadiovana ny lisitry ny mailakao sy ny fomba fanadiovana ny mpizara | Martech Zone
Mifantoka betsaka amin'ny marketing amin'ny mailaka izahay tato ho ato satria tena mahita olana maro amin'ity orinasa ity izahay. Raha manohy mandrangitra anao amin'ny fitomboan'ny lisitry ny lisitry ny mailaka ny mpanatanteraka iray, dia tena mila manondro azy ireo amin'ity lahatsoratra ity ianao. Ny zava-misy dia, arakaraka ny habe amin'ny haben'ny lisitra mailakao no mety manimba ny fahombiazan'ny marketing amin'ny mailakao. Tokony hifantoka amin'izany kosa ianao firy ny mpanjifa mavitrika anananao ao amin'ny lisitrao - ireo manindry na manova fo.
Antony fanadiovana ny lisitry ny mailakao
laza - Ny ISP dia manakana na mametraka ny mailakao ao amin'ny folder junk mifototra amin'ny laza ratsy mandefa IP. Raha mandefa adiresy mailaka ratsy foana ianao, dia hisy fiatraikany amin'ny lazanao izany.
Lisitra mainty - Raha tsy dia tsara laza ianao dia azo sakanana daholo ny mailakao.
Fidiram-bola - Raha betsaka amin'ireo mailaka ataonao no mampiditra azy amin'ny boaty mailaka miaraka amin'ireo mpamandrika mavitrika, dia hiteraka fidiram-bola bebe kokoa izany.
Cost - Raha ny antsasaky ny mailaka ataonao dia mandeha amin'ny adiresy mailaka maty dia mandoa indroa izay tokony ho izy amin'ny mpivarotra mailakao ianao. Ny fanadiovana ny lisitra dia hampihena ny vidin'ny ESP anao.
lasibatra - Amin'ny alàlan'ny famaritana ireo mpisoratra anarana tsy miasa anao dia azonao atao ny mandefa fanolorana fifandresen-dahatra mivantana amin'izy ireo, mikendry azy ireo amin'ny media sosialy ary hahitana raha azonao atao ny mampiditra azy ireo indray.
fifandraisana - Amin'ny fananana lisitra madio dia fantatrao fa miray amin'ny mpamandrika izay mikarakara ianao hahafahanao mifantoka tsara kokoa amin'ny hafatrao.
tatitra - Raha tsy manahy momba ny haben'ny lisitra sy mifantoka amin'ny firotsahana ianao dia afaka mahazo angon-drakitra marina kokoa momba ny fahombiazan'ny programa fikolokoloana sy mailakao.
Manoro hevitra ireo mpiara-miasa aminay izahay amin'ny Neverbounce ho an'ny serivisy fanamarinana mailaka! Ny algorithma nananan'izy ireo sy ny fanamarinana avy amin'ny antoko fahatelo dia nitondra fiovana lehibe teo amin'ny fahafahan'ny mpanjifanay mitondra. Neverbounce manolotra tolotra manome antoka 97% azo antoka. (Raha toa ka mihoatra ny 3% ny mailaka manan-kery no miakatra aorian'ny fampiasana ny serivisinay dia hamerina ny fahasamihafana izy ireo.)
Endri-javatra Neverbounce misy:
Dingana fanamarinana 12-dingana - Ampiasaina ny teknolojia MX, DNS, SMTP, SOCIAL, ary fanampiny amin'ny famaritana ny maha-marina ny adiresy, ny fizotran'ny fanamarinana 12-dingana ananantsika dia manamarina ny mailaka tsirairay hatramin'ny 75 heny avy amin'ny faritra samihafa - toerana manerana an'izao tontolo izao.
Fitaovana fanadihadiana maimaim-poana - Andramo tsy misy vidiny ny angon-drakitrao. Hiverina amin'ny tatitra izahay raha azo antoka ny mandefa izany na mila diovina amin'ny sandan'ny fitombenana. Amin'ny maha mpanjifa NeverBounce anao dia manana fampiasa tsy manam-petra an'ity endri-javatra ity ianao. Ho fanampin'izany, azonao atao ny manangana ny fandalinana ataon'izy ireo maimaimpoana ao anatin'ny rafitranao manokana amin'ny alàlan'ny API misy anay fa tsy andoavany vola izany.
Fanosehana lisitra maimaim-poana - NeverBounce dia manolotra de-duplication maimaim-poana sy fanesorana ny syntax ratsy alohan'ny hanomezana vola lany amin'ny asanao. Tsy mandoa vola mihitsy izahay amin'ny fikosehana.
Tsy mampiasa angona tantara mihitsy izy ireo - Miova tsy tapaka ny mailaka, ary na dia ny ankamaroan'ny orinasa mpanamarina aza dia mitahiry vola amin'ny fanomezana valiny ara-tantara, dia manamarina ny mailakao isaky ny mandeha izahay, miantoka ny valiny farany sy marina indrindra. Amin'ny fotoana fihodinana haingana indrindra amin'ny orinasa dia tsy hiandry ela ianao vao hanadio sy hanamarina ny lisitrao.
Fakafakao maimaim-poana izao ny lisitry ny mailakao!
Ity infographic avy amin'ny Email moanina manome ny lisitry ny dingana raisina ihany koa hanadiovana ny mpamandrika sy hanadio tsara ny lisitry ny mailakao.
Tags: mpandray anjara mavitrikaAza kivy-lamosinylisitra mailaka madiofanateranamailaka madiofanadiovana mailakavidin'ny mailakalazan'ny mailakafidiram-bola amin'ny mailakafizarana mailakampamatsy tolotra mailakampandefa mailakafanamarinana mailakaESPesp vidmpamandrika tsy miasamanadio ny mpamandrikare-andraikitra